China Cabinet ụzọ akàrà factory na-emepụta | Tianzheng
Cabinet ụzọ akara na-mere nke epdm roba ígwè, ogbo ụfụfụ, nchara oké ogbo mejupụtara site na elu mepụtara nka. Na-eji ire ụtọ elu na magburu onwe Njirimara nke mgbochi ịka nká, mgbochi weathering na mgbochi ozone. Ezi uchu akụkụ tolerances na nwere magburu onwe compressability elasticity na ime mgbanwe iji mkpumkpu akuko. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịka akara na nsị. Belata mmiri na ikuku infiltration, oké mgbanwe akara eriri, abụọ ekweghị ekwe na inextensible, mụ ngwaahịa -extrusion, elu akụkụ ziri ezi. Anyị nwere ike ịnye na rụpụta ngwaahịa ndị ahụ dịka ihe ndị ahịa anyị chọrọ. Anyị nwetara iso9001 na iatf16949, anyị na-ekwe nkwa ịdị mma dị elu na nnyefe kacha mma.
Cabinet ụzọ akara na-mere nke epdm roba ígwè, ogbo ụfụfụ, nchara oké ogbo mejupụtara site na elu mepụtara craft.with ezigbo elu na magburu onwe Njirimara nke mgbochi ịka nká, mgbochi weathering na mgbochi ozone.
Ezi uchu akụkụ tolerances na nwere magburu onwe compressability elasticity na ime mgbanwe iji mkpumkpu akuko. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na akara na mgbochi.reduce na mmiri na ikuku infiltration, oké mgbanwe akara eriri, abụọ ekweghị ekwe na inextensible, anụ ngwaahịa -extrusion, elu akụkụ ziri ezi. Anyị nwere ike na-ezite na Nlụpụta ngwaahịa dị ka ndị ahịa anyị chọrọ.we nwetara iso9001 na iatf16949, anyị na-ekwe nkwa elu mma na kacha mma nnyefe.
Nguzogide Okpomọkụ: EPDM: -40 ℃ ~ + 120 ℃
Agba: Red, Blue, Black, Green, Oroma wdg Dị iche iche na agba (nwere ike gbanwee dị ka ngwa)
Ogo na ọdịdị: ahaziri dị ka ndị ahịa ịbịaru ma ọ bụ n'omume ma ọ bụ isi ihe
Mmiri Nguzogide Mmiri: 100%
Production usoro: extrusion akpụ
Productdị ngwaahịa: U ngalaba, profaịlụ H, wdg.
Ọrụ: mechie, iji kpuchido ahụhụ, ifufe, mmiri, nkwekọrịta na mkpuchi mkpuchi
Mbukota: mpịakọta na ike exported katọn ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Rubber akara warara maka kabinet ụzọ / kabinet ụzọ akàrà gụnyere a epdm siri ike "U" Channel warara na a epdm ogbo roba bọlbụ, nakwa dị ka ndị pụrụ iche metal mkpachị na ire ụtọ iji nye a mma gripping, extruded roba akara na-bụ-eji na gwongworo. , traktọ, akụrụngwa, igwe, ọnụ ụzọ ụgbọ ala, ụgbọ ala gwongworo, ụgbọ golf, atv fender, traktọ, igwe eji agba igwe.
Kewapụ kabinet roba akara. Mgbe ahụ, wepụ ihe nkwado liner ahụ site n'akụkụ nrapado nke akara roba ma pịa akara roba ahụ n'ọnọdụ ya. Nke ọzọ, belata akara roba ahụ ka ọ too. Tinyegharịa usoro a na ọnụ ụzọ ndị ọzọ. N'ikpeazụ, lelee iji jide n'aka na e nwere nkwekọrịta siri ike n'etiti ọnụ ụzọ na akara roba, mgbe ahụ anyị ga-emecha nwụnye.
Nke gara aga: Mechanical akara warara
Osote: Foma Rubber Akara
Kitchen orzọ Door Akara